Vana veForm 5, Form 3 neGrade 6 vadzokera kuchikoro neMuvhueo pasi pehurongwa hwehurumende hwekuvhura zvikoro zvishoma nezvishoma panguva iyo vadzidzisi vakawanda vachiri kuramwa mabasa izvo zviri kuita kuti vamwe vabereki vatyire vana vavo.
Kunyange hazvo vana vechikoro vakawanda munyika vadzokera kuzvikoro uye vamwe vari muma boarding schools vakadzokera neSvondo, vamwe vabereki vanoti vari kutyira vana vavo sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa.
Mumwe mubereki uyo angozvidoma nezita rekuti Muzvare Musika vaudza Studio 7 kuti vakarambidza mwana wavo kuenda kuchikoro nekuti vakaudzwa nemukuru wepachikoro panodzidza mwana wavo kuti vadzidzisi havazi kuuya kubasa.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti muzvikoro zvakawanda munyika vadzidzisi havasi kuenda kubasa.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees VaBanny Manokora vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinofara kuti hurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro zvikamu nezvikamu kuri kuenderera mberi.
Asi vati mashoko emisikanzwa yaiitwa nevamwe vana vechikoro akabuda pakavhurwa zvikoro ari kuita kuti vashushikane sezvo vadzidzisi vari kuramba vachiramwa mabasa.
Kunze kwekutyira nyaya yekuti vana vanenge vachiita misikanzwa muzvikoro sezvo musina vadzidzisi, vamwe vabereki vari kutyirawo nyaya yekutapuriranwa kwehutachiwana hwecoronavirus. Pane mumwe mwana akabatwa nehutachiwana uhu pane chimwe chikoro muguta reBulawayo svondo rapera.
Mukuru wesangano reProgressive Teachers’ Union of Zimbabwe, PTUZ, VaTakavafira Zhou vati vana vadzokera kuzvikoro nekuda kwekuti vabereki vapererwawo nezano rekuti vodii navo. Asi vati vabereki vanofanirwa kuziva kuti kuendesa vana kuchikoro ivo vadzidzisi vasati vadzokera kumabasa kuisa vana panjodzi.
VaZhou vati vadzidzisi vachiri kuramba vakamira pachitsidzo chavo chekuti havadzokeri kubasa kana vasati vapiwa mari yemuhoro yavari kuda, iyo inove mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Asi vati vadzidzisi vanoramba vakazvipira kutaurirana nehurumende.
Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, VaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kuenderera mberi nehurongwa hwekuvhura zvikoro kwehurumende kunoratidza kuti haina hanya nehupenyu hwevana vechikoro uye nedzidzo yemunyika.
Asi vatiwo vadzidzisi vakazvipira kutaura nehurumende vachiti sangano ravo rakanyorera makurukota ezvemari nedzidzo richikurudzira nhaurirano.
Taedza kubata gurukota rezvedzidzo VaCain Mathema kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu muzvikoro asi nharembozha yavo yange isingabatike. Asi vaudza bepanhau reHerald kuti hurumende yakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro uye icharamba ichiona kuti hutano hwevana hwachengetedzeka. Hurumende inoti iri kutsvagawo vamwe varairidzi kutsiva vari kuramwa mabasa.
Tabata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubazi iri VaTaungana Ndoro tikavanyorera mibvunzo yavange vati vachapindura asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo.
Vadzidzisi vakatanga kuramwa mabasa pakavhurwa zvikoro pachikamu chekuvhurwa zvikoro chekutanga pakupera kwaGunyana vachiti mari yemihoro yavanowana haikwanise kuti vadzokere kumabasa.
Hurumende yakawedzera vashandi vehurumende mari asi vadzidzisi vari kuramba vakatsika madziro. Mumashoko avakatura pamusoro pemamiriro ezvinhu munyika svondo rapera mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo iri kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi.
Nyaya Ina Kudznai Shava